Malunga nathi -Beijing Landwell Electron Technology Co., Ltd.
Ngenkunzi eyimali ebhalisiweyo yezigidi ezingama-20, iLandwell yasekwa eBeijing ngo-1999 kwaye igubungela indawo yeofisi ezingama-5000 square metres. Luphawu oludumileyo kwishishini lokhuseleko kunye nosekela sihlalo woMbutho Wezokhuseleko wase China. Kwinqanaba lokuqala, UMHLABA waphuhliswa ngokukhawuleza kuxhomekeke kubungcali kunye nokuseka amalungelo ayo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye neempawu ezizimeleyo ze- "Landwell" kwiimveliso ezichazayo ezizenzekelayo. Yakhele iNkqubo yoKhenketho yoKhuseleko enkulu kunye neNkqubo yoLawulo oluPhambili yoLawulo oluPhezulu kunye namashishini aphambili ngeR & D, imveliso, ukuthengisa kunye nasemva kokuthengisa. Ukusukela ngo-2003 umhlaba osele usemgangathweni wamiselwa kunye nee-ofisi kwilizwe liphela, e-shanghai, Shenzhen, Nanjing, Hangzhou, Wuhan,
Changsha, Zhengzhou, Xi'an, Chengdu, Yantai, Shenyang, Xinjiang njl, amaziko amabini eR & D kunye neziko elinye lesoftware. Ngokophando lweenkcukacha-manani olwenziwa ngoonondaba ebaleni, iimveliso zeLandwell kwintengiso kunye netekhnoloji ebaleni ziye zangunombolo 1 kwiminyaka eqhubekayo eTshayina kwaye zibekwa phezulu kwihlabathi liphela. Iimveliso zibandakanya ukujikeleza koonogada, inkqubo yokujikeleza okrelekrele, inkqubo yokujikeleza kweshishini, inkqubo yolawulo lokufikelela kwimithambo ephezulu, iimveliso ezikrelekrele zokulwa ubusela. Ngeentlobo ngeentlobo zeemveliso kunye netekhnoloji yamva nje, iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-50 kunye nemimandla efana ne-United States, Germany, UK, France, Russia, Japan, Brazil, Singapore, South Africa, Poland, South Korea njalo njalo .
Ukusukela ngo-1999, uLandwell uneminyaka eli-16 yembali yophuhliso; Uluhlu njengelinye leyunithi yokuyila "iMigangatho yeSizwe yeMigangatho yeNkqubo yoKhenketho yaBalindi",
Usekela sihlalo weChina Security Association Inkampani edumileyo kwihlabathi kwicandelo lokuchonga elizenzekelayo.
Ishishini elinempembelelo enamaxabiso eLungelo leNkqubo yoKhenketho loKhuseleko;
Uphawu lwokhuseleko oludumileyo e-China.
Ukhetho lokuqala lwenkqubo yokujikeleza kukhuseleko, inkqubo yolawulo lwentsimbi ekrelekrele;
Ngokusekwe kukunyaniseka: ishishini elihlala ixesha elide lixhomekeke ekuthembekeni.
Ngokunyaniseka ebantwini: bubuntu babantu, isiseko seshishini. Sonke sinyanzelisa ukujonga ukuthembeka kunye nokugcina ukholo oluqinisekileyo kubathengi, kwabo sisebenza nabo. Imali ixabisekile, kodwa ukuthembeka kuphezulu.
IKhabhinethi Yolawulo Oluphambili, Ibhokisi ephambili ejingayo, Inkqubo yoLawulo lwebhokisi encinci kunye nesitshixo, Ibhokisi yoKhiye woLawulo, IKhabhinethi eKhulu yokuGcina, IKhabinethi ephambili etshixwayo,